China Men akpụkpọ anụ ajị anụ moccasins factory na suppliers | Yiruihe
Akpụkpọ anụ Wool Moccasins
Lady Cross Vamp Atụrụ atụrụ S ...
Lady Yi Open ụkwụ ụkwụ ...
Lady Yi nso ụkwụ Ọ ...
Lady Classic Cuff Atụrụ atụrụ ...
Iji anụ ehi mee Upper, moccasins nwere ike ịdị ọcha dị mfe. Mmetụta nke imetụ aka dị nnọọ iche na suede ehi. Dị TPR ahụ dị mkpa nwere ike ime ka onye nwe ya dịkwuo ọkụ.
Vamp: Akpụkpọ anụ Ehi
Mkpuchi: Ajị anụ
Insole: Ajị anụ
Azụ: mkpa TPR
Size iche: # 7-13 maka UK size / # 41-46 maka Euro Size / # 8-14 maka nha USA
Agba: Enwere ike ime agba ọ bụla.
A na-eme mkpuchi na insole site na A Level Australian Wool.
Ọnọdụ dị mma ： Maka ime ụlọ & N'èzí
Ndị akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-acha odo odo. ka ndị mmadụ na-agbaso ụdị ejiji dị mma karị, akpụkpọ ụkwụ nke ajị anụ atụrụ dị ọcha na-aghọwanye ewu ewu.
Ezigbo akpụkpọ ụkwụ niile na-acha uhie uhie dị mma iji eyi n'afọ niile n'ihi na akpụkpọ anụ atụrụ na-enwe okpomọkụ mgbe niile, nke pụtara na ha na-edozi ahụ gị ka ụkwụ gị wee nwee ntụsara ahụ n'oge ọ bụla. ha na-ekpo ọkụ nke ukwuu n’oge oyi, ma ụkwụ ha na-ajụ oyi n’oge ọkọchị.
Akpụkpọ ụkwụ anyị dị nro nke ajị anụ bụ nke Australia bụ ezigbo A aji ajị anụ na akpụkpọ ụkwụ na insole, nke abụghị naanị okpomoku na-adịgide adịgide, kamakwa nwere hypoallergenic na antibacterial properties. nke a pụtara na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara isi ụkwụ ọzọ. eriri ndị dị na akpụkpọ anụ atụrụ nwere lanolin, nke na-eme ka ụkwụ gị dị ọhụrụ n'agbanyeghị ogologo oge ị na-eyi ya, ajị anụ na-enye aka ịmịkọrọ mmiri mmiri n'ụkwụ gị, na-eme ka ha kpọrọ nkụ ma nwee ntụsara ahụ ọ bụrụgodi na ọsụsọ ga-agba ha. gbochie uto nke nje bacteria, maka ndị nwere allergies, ọ zuru oke.
Nke elu dị nro ma na-eguzogide ọgwụ. A na-ejide aka n’elu ka aka ya siri ike. dị mfe ihicha, dị hichapụ ya ọcha na a keguru mmiri ákwà.
Okpukpo rọba na-adịghị amị amị amị, na-eyi nke ọma ma nwee ezigbo njide, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka ha maka ogologo ije ma ọ bụ mmiri, apịtị, okporo ụzọ na-amị amị.
Moccasins nke atụrụ na-adị mfe ma dị mfe iji eyi nke jeans ma ọ bụ slacks. ọ dị ka ejiji na nwata. Mgbe ihu igwe dị oyi, ị nwere ike iyi ya n'ụlọ. Ala dị nro agaghị eme mkpọtụ n’elu ala, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara imetụta ndị ezinụlọ gị ndị ọzọ.
Pairdị akpụkpọ ụkwụ a na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide nke akpụkpọ ụkwụ moccasins bụ ezigbo nhọrọ maka ị ga-eyi ma ọ bụ nye onyinye.
Nke gara aga: Lady Whole Cuff Wool Moccasins
Osote: Lady Cuff Wool Slipper
Menmụ nwoke Australian Merino Sheepskin Moccasin Slippers
Lady Cuff Ime ụlọ Wool Moccasins
Nwanyị Cuff Wool Moccasins
Lady Cuff Rubber naanị Wool Moccasins